Izindlela Ezi-9 Zokuvimbela Inkohlakalo Yefayela le-PST - DataNumen
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Izindlela Ezi-9 Zokuvimbela Inkohlakalo Yefayela Le-PST
Izindlela Ezi-9 Zokuvimbela Inkohlakalo Yefayela Le-PST
Amafayela e-Outlook PST athanda inkohlakalo. Ingabe zikhona izindlela zokuvimbela lokhu? Impendulo ithi YEBO! Ngezansi ngibhala u-8 most izindlela ezibalulekile zokuvimbela ifayela lakho le-PST ekonakaleni noma ekonakaleni:
Ungavimbeli ifayela lakho le-PST. Yize i-Outlook 2003/2007 manje isekela amafayela we-PST amakhulu njengama-20GB. Futhi i-Outlook 2010 isekela ama-50GB, kusanconywa kakhulu ukuthi ifayela lakho le-PST akufanele libe likhulu kune- 10GB, ngoba:
Most Ukusebenza nefayela elikhulu le-PST kuhamba kancane
Amafayela amakhulu kungenzeka onakaliswe.
Yize ezinye izinkohlakalo ezincane zingalungiswa yi-Outlook noma i-scanpst, uma ifayela le-PST likhulu, inqubo yokulungisa isazodla isikhathi.
I-Outlook 2003-2010 manje isekela ukuvula amafayela amaningi we-PST ndawonye kuphaneli yesobunxele. Ngakho-ke, kunconywa kakhulu ukuhambisa ama-imeyili akho uwafake kumafayili e-PST ahlukahlukene anemithetho ye-Outlook, ukunciphisa usayizi wefayela ngalinye le-PST.
Ungavumeli ifomethi yakho yefomethi ye-PST ifinyelele ku-2GB. Izinguqulo zeMicrosoft Outlook 2002 nezangaphambili zilinganisela usayizi wefayela le-Personal Folders (PST) ku-2GB. Noma kunini lapho usayizi wefayela le-PST useduze no-2GB, uzohlangabezana nezinkinga eziguquguqukayo nefayela le-PST livame ukonakala. Ngakho-ke, qiniseka njalo ukuthi ifomethi yakho yefomethi ye-PST ingaphansi kune- 1.5GB kuwumkhuba omuhle.
Ungasebenzi ngevolumu enkulu yama-imeyili. IMicrosoft Outlook izokhiya ifile uma usebenzisa inani elikhulu lama-imeyili ngasikhathi sinye. Futhi ngemuva kokukhiya okufile, kuzofanele ucishe i-Outlook ngokungajwayelekile okungadala ukonakala kwefayela le-PST. Umkhawulo wokuhlangenwe nakho ngu 10,000 ama-imeyili. Ngakho-ke, lapho uzama ukukhetha, ukuhambisa, ukukopisha noma ukususa ama-imeyili angaphezu kwe-10,000, ungawasebenzisi ngeqoqo elilodwa. Esikhundleni salokho, sebenzisa ku-most Ama-imeyili ayi-1,000 XNUMX ngasikhathi, phinda lo msebenzi kuze kube yilapho wonke ama-imeyili esetshenzwa.
Ungalondolozi ifayela lakho le-PST kudrayivu yenethiwekhi noma kuseva. Ifayela le-PST lenzelwe ukugcina kumakhompyutha asendaweni. Ungayigcini kudrayivu ekude noma kuseva ngoba imvelo yenethiwekhi ayikwazi ukuxhasa ukufinyelela okuminyene kwefayela le-PST futhi izodala inkohlakalo yefayela le-PST njalo. Futhi ungabelani ngefayela le-PST kunethiwekhi futhi ungavumeli abasebenzisi abaningi ukuthi bafinyelele ikhophi elifanayo lefayela le-PST ngenethiwekhi ngasikhathi sinye, ethambekele ekufakeni inkohlakalo.
Ungayivali i-Outlook uma isasebenza. Uma uvala i-Outlook ngokungajwayelekile lapho isasebenza, ifayela le-PST elizotholwa yi-Outlook ngaleso sikhathi lizokonakala kalula. Ngakho-ke, kufanele UNGALOKOTHI cisha i-Outlook ngokungajwayelekile kumphathi womsebenzi. Kwesinye isikhathi lapho uvala i-Outlook, izobe isebenza ngemuva, ukucubungula eminye imisebenzi, njengokuthumela / ukwamukela ama-imeyili. Esimweni esinjalo, kwesinye isikhathi, ungabona isithonjana esincane se-Outlook kudrayivu yesistimu. Noma kunjalo, indlela engcono yokuthola ukuthi i-Outlook isasebenza yini ku- start “Umphathi Womsebenzi” bese ubheka ukuthi ngabe "NGOKUKHANGELA.EXE" ikhona "Izinqubo" list (Hlunga uhlu ukukusiza ukuthi uluthole kalula.). Kwesinye isikhathi uzothola i-Outlook ihlale inkumbulo kuze kube phakade. Lokhu kungenxa yokuthi i-Outlook izama ukuthumela / ukwamukela ama-imeyili ngenethiwekhi futhi inethiwekhi yakho ayisebenzi kahle, ngakho-ke i-Outlook kufanele ilinde ngokungapheli noma ngemuva kokuphuma kwesikhathi. Esimweni esinjalo, uma ufuna ukusheshisa ukuvalwa kwe-Outlook, lapho-ke ungakhubaza ukuxhumana kwenethiwekhi okusetshenziswa yi-Outlook ngesandla. Ngemuva kwalokho, ukuxhumeka kwe-Outlook kuzophelelwa yisikhathi futhi kuzokhipha imisebenzi yangemuva bese kuphuma maduze. Kwamanye amacala, uma i-Outlook noma i-Outlook tray ihlala ingapheli, ungazama ukukwenza Restart I-Outlook, linda imizuzu eminingana, bese uphuma, inqubo enjalo ingasiza i-Outlook ukuphuma ngokuphelele kohlelo.
Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi i-Outlook iphumile ngaphambi kokuvala / ukucisha ikhompyutha yakho. Njengo-5, uma uvala noma uvula ikhompyutha yakho ngaphandle kokuyeka i-Outlook, ifayela lakho le-PST cishe lizochitheka. Ngakho-ke, yize kukuphazamisa kancane, qiniseka ukuthi i-Outlook yakho iphumile ngaphambi kokuvala uhlelo lwakho lwekhompyutha. Noma ungenza uhlelo lokusebenza oluncane ukukuhlolela lokhu ngokuzenzakalela.
Qaphela ngohlelo lwakho lwe-AntiVirus. Uma ifayela lakho le-PST likhulu futhi liqukethe ama-imeyili amaningi, futhi uhlelo lwakho lwe-AntiVirus luzolivikela. Ngemuva kwalokho most Ukusebenza ngama-imeyili asefayilini lakho le-PST kuzothinteka nakuhlelo lwakho lwe-AntiVirus. Uma uhlelo luhamba kancane, imisebenzi nayo izokwehliswa. Kubikwa ukuthi ezinye izinhlelo ze-AntiVirus zingalimaza ifayela le-PST. IMicrosoft OneCare ingasusa ngisho namafayela e-PST.
Qaphela i-Outlook Add-Ins. Ezinye izengezo ze-Outlook Add-Ins zingadala ukonakala kwefayela lakho le-PST uma kungadizayinelwe kahle noma kusebenza kahle. Ngakho-ke, kwesinye isikhathi udinga ukukhubaza i-Add-Ins uma ifayela lakho le-PST lonakaliswa kaningi.
Yenza isipele amafayela wakho we-PST masonto onke. Ukwenza isipele kuyindlela engcono yokuvimbela ukulahleka kwedatha. Njalo gcina amafayela wakho we-PST ngezikhathi ezithile ukuze kuthi noma nini lapho ifayili lakho le-PST lonakele futhi lingatholakali, ungabuyisa isipele sakamuva.
Uma amafayela akho e-PST onakalisiwe, kusenokwenzeka ukuwalungisa nokulungisa, ngamathuluzi alandelayo:
skena.exe. Futhi kubizwa Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lemilayezo Engenayo. Leli ithuluzi lamahhala elifakwe ne-Outlook yakho. Ingalungisa i-most yamaphutha amancane nokonakala kumafayili akho e-PST. Imininingwane engaphezulu ingatholakala ku- lapha.
DataNumen Outlook Repair. Uma i-scanpst ingakwazi ukulungisa ifayela lakho le-PST, noma ingakwazi ukuthola ama-imeyili owafunayo, ungasebenzisa DataNumen Outlook Repair. Ingalulama ifayela le-PST elonakele kakhulu. Uma nje kukhona noma iyiphi idatha ye-Outlook ekhona kufayela lakho le-PST elonakele, lapho-ke DataNumen Outlook Repair ungazithola futhi uzilondoloze kufayela elisha le-PST elilungisiwe.